Gabaasa FXG Godinoota Oromiyaa Garaagaraa. | QEERROO
Gabaasa FXG Godinoota Oromiyaa Garaagaraa.
Posted on July 19, 2017 by Qeerroo
Adooleessa 18,2017/Godina Arsii Aanota hedduu keessatti guyyoota lamaan har’aaf kaleessa lagannaan gabaa kan taasifame yoo ta’uu Suuqonni daldalaa magaalota akka Seeruu,Balee, Geersaa, Shaashamannee,Adaabbaa, Dodola,Roobe,Saddiiqa, Waabee, Eddoo, Kofalee, Nageellee, Ajjee keessatti Gibira Wayyaanen Ummatarratti feete mormuun gabaa lagatanii jiru. Tajaajilli Geejjibaas dhaabbateera Konkolaachiftoonni fi Abbootin qabeenyaa sabaan Oromoo hin ta’in muraasni isaanii dalagaa isaanii didanii kan itti fufan yoo ta’uu. Diddaa kanatti akka makaman karaa adda addaatin Qeerron ergeefii kan jiru yoo ta’uu gaaffii isaanif dhiyeessine kana fudhachuun gara ummataa hin goran yoo ta’e Qeerron tarkaanfii Qabeenya isaanii irratti akka fudhatus hubachiisee jira. jedhu Gabaasaalen Qeerroo magaalota adda addaa irraa nu gahaa juru.
Godina Arsii Aanaa Adaabbaa Gandoota Baadiyyaa hedduu keessatti wayyaanen Qonnaan Bultoota walitti qabdee Ujoollee teessan magaalaa Adaabbaa keessa jirantuu lagannaa gabaa godhaa jechuun Ummata kakaasee galiin gibiraa mootummaa akka hin kaffalamne godhaa jira ujoollee warri magaalaa qabdan gandaa fi lakkoofsa manaa ujoollen teessan keessa teettu maqaa isaanii guutuu wajjiin galmeessisaa Mootummaan namoota jeequmsaaf ummata kakaasan addaan baasee beekudhaan hubannoo kennuufii barbaadaa jechuun Qonnaan bultoota doorsisaa jiraachuu maddeen keenya Adaaabbarraa gabaasanii jiru
Godina Baalee Aanaa Agaarfaa keessatti Wayyaanen addatti Abbootii
Qabeenyaa Sabaan Oromoo ta’an humnaan gibira irratti fe’uun dirqamaan
kaffalaa jechaa jiraachuun dhagayame Abbootii Qabeenyaa Wayyaanen
dirqisiisaa jirtu keessaa muraasa1, Haaji Xaahiroo Kuma 180 Mana
Baaburaatif 2,Hajjii Waayyuu Madaala (Mizaana) Midhaanitiif Kuma 90
3,Shee Hajjii Mana Nyaata foonitiif kuma 140 4,Bantiyyee Mana
nyaatatiif kuma 75 5,Fiqaaduu Kuma 90 Mana kopheetif 6,Muhaammad
Huseen Kuma 80 Mana foonitiif 7,Boggaalaa kuma 65 Baabura Midhaanitiif
ta’uu maddeen Oduu Qeerroo Aanichaa kan gabaase yoo ta’uu manneen
daldalaa guutun guyyaa har’aa lagannaa gabaatti jiraachuunis
Magaalaa Walisootti Poolisoonni wayyaanee Ummata mana manarra deemuun dirqamaan wal gahii waamudhaan lagannaa gabaa ummanni sababii kaffaltii gibiraatin godherratti namoota Ummata kakkasan uf keessaa baasaa. Daldaltoonni hojii dhaabdanis nutuu isin bira jira rakkoon isinirra gahu hin jiruu borurraa eegaltanii hojii keessan eegaluu qabdu ta’uu baannan qabeenyi keessan isinirraa fudhatamee karaa mootummaatin faaydaa ummataatif akka oolu ta’a jechuun ummata sodaachisuuf yaalaa ooluu maddeen Oduu Qeerroo Magaalaa walisoo gabaasanii jiru.
Adoolessaa 18/2017 Godina Lixa Shaggar Aanaa Adaa’aa Bargaa Magaalaa Incinnii Keessatti Qeerroon Dargaggootni Oromoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG daran jabeessuun finniinsaa jiruu, Warraaqsii kun yeroo amma sagalee dhaadannoo jabaa dhageesisuun itti fufani jiru.
Adooleessa 17/2017 Sochiin Warraaqsa FXG mormiin diddaa gibiraafi qaraxaa seeraan ala daran jabaachuun duulli gabaa lagachuufi tajaajila Geejjibaa dhaabuufi daandii Konkolaataa cufuu Godina Lixa Shaggar Addatti Magaalaa Amboo fi Naannoo Ishee, Giincii , Gudaar , Tokkee Kuttaayyee , Baabbichaafi bakkoota hedduutti daandiin konkolaataa gara Lixa Oromiyaatti geessuu waan citeef uummatni Imaltoonni gara dhihaa Oromiyaatti Socho’aan #buufata_konkolaataa_Finfinnee_muddan. Magaalaan Finfinnee naannoon buufatalee konkolaataa muddama cimaa keessa seentee jirti.
Gaaffiin Mirga abbaa biyyummaa uummatni Oromoo mirga isaa karaa nagaa gaafatee kumootaan itti wareegamaa jiru hanga deebii argatuufi karoorrii Master plan Finfinnee tooftaa jijjiirratee hojiirra oluuf wixineen wayyaanee guutummaatti hanga haqamutti qabsoon bifa wal irraa hin citneen itti fufa.
guyyaa hardhaa lixaa shaggar aanaan Baakkoo Tibbeetti duulli gabaasa lagachuu eegaleera. Suqonnii fi manneen nyaataa tokko tokkoos cufamanii akka oolan qeerroon Baakkoo Tibbee addeessan. Diddaan kun hanga sirni nama nyaataa kun diinni saba keenyaa kun gochaa dinummaasaa nurratti rawwachaa jiru nurraa kadhutti waan eegalle itti fufna jechaa jiru.
Haaluma kanaan qeerroon Baakkoo Tibbee FXG fi Diddaan gibira seeraan alaa kana hangar dhabutti diddaan bifa wal fakkaatuun kutaa hundatti akka gaggeeffamu dhaammataniiru.gabaasa biraa dudduubaan.